ပြောရဦးမယ် အေ တော်ရေ…!!! | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » ပြောရဦးမယ် အေ တော်ရေ…!!!
ပြောရဦးမယ် အေ တော်ရေ…!!!
Posted by ဇီဇီ on Aug 21, 2014 in Business & Economics, Creative Writing, Jobs & Careers, Short Story | 34 comments
စလုံး လိုကယ် ကမ်ပနီထဲမှာ တော်တော်နာမည်ကြီးတဲ့ ကမ်ပနီ တစ်ခုပေါ့လေ။
ချိန်းထားတဲ့လူက စီနီယာ ပရော့ဂျက် မန်နေဂျာ။
လူပုံချောချောသန့်သန့် နဲ့ အဲဒီ ကမ်ပနီမှာ မျက်နှာပြရတဲ့ အလုပ်ပဲ လုပ်ရတယ်။
ဆိုတော့ ကိုယ်တွေက အလုပ်အတွက် တွေ့ဖို့ချိန်းတိုင်း သူနဲ့ပဲ ပြောရတယ်။
မင်းသားကြီးနဲ့ အတော်လေပေးဖြောင့်တယ် ပြောရမယ်။
သိတာလည်း ၄ နှစ်လောက်ရှိပြီ။
ကိုယ့်လည်း ဘယ်လောက်များချစ်တုန်း၊ မျက်စိကျတုန်းဆို မင်းသားကြီးရှေ့တင် သူတို့ ကမ်ပနီကို လာ အလုပ်လုပ်မလား…အမြဲခေါ်နေတာ။
ဆိုတော့ ကေဇီနဲ့ အတော်ချစ်ခင်တဲ့ အချစ်တော်တစ်ယောက်လို့ ပြောရမှာပေါ့လေ။
ကေဇီ မင်းသားကြီး ဆီမှာ မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူး ဆိုရင် သူ့ဆီ သွားဖို့စဉ်းစားထားတာပါ။ မင်းသားကြီး ကို မခွဲနိုင်သေးလို့သာ။
အဲဒါလေ မနေ့က အစည်းအဝေးမှာပဲ ဒင်းနဲ့ ဇာတ်ခေါင်းကွဲပါရော့လားးး..
သူ့ နာမည် အက်ဒီ တဲ့။
အစည်းအဝေး စ တာနဲ့ အက်ဒီ ရယ် မင်းသားကြီး တော်မီ ရယ် ပြောလိုက်ကြတာ အကြောင်းအရာစုံ ရေပက်မဝင်မို့။
ကိုယ်တွေရယ်၊ အဲဒီဘက်က အင်ဂျင်နီယာလေးတွေရယ် က ငုတ်တုတ်ပေါ့။
ခဏ နေကျတော့ စကား လမ်းကြောင်းက မြန်မာပြည်ကို ရောက်သွားပါတယ်။
မင်းသားကြီး က ရန်ကုန်ဘက် နယ်ချဲ့ချင်တာ သိထားတော့ အကျိုးအကြောင်း မေးသပေါ့။
ဒီ အချိန် ရန်ကုန်မှာ အလုပ်လုပ်ဖို့ စဉ်းစားဖို့ ကောင်းကြောင်းးး
ဒီ က အင်/ယာတွေလည်း တော်တော်များများပြန်နေပြီဖြစ်ကြောင်းးးး
အက်ဒီ က လည်း ဟုတ်မှန်ကြောင်းးး
ခု ဆို ကွန်ဒို မီနီရမ် ပရော့ဂျက်တွေ အများကြီး ရှိကြောင်းး
ဟို ခု ပရော့ဂျက် တစ်ခုမှာ သူတို့ ပါကြောင်းး (ဟို တခါ မနော တင်တဲ့ ပရော့ဂျက်ဟာလေ)
အဲဒီလို ဘာညာသာရကာကို ကိုယ့်ရှေ့မှာ ကိုယ့်ထက် မြန်မာပြည် အကြောင်း သိတဲ့ အထာတွေနဲ့ ပြောကြပါတယ်။
စိတ်ထဲမှာ ပြင်ပေးချင်တဲ့ တစ်ချို့ ထင်မြင်ချက်ရှိပေမဲ့ ကေဇီ အောင့်ထားပါတယ်။ မပြောပါဘူးး။။
အဲ။ အဲဒီမှာ နောက်တစ်ခု အက်ဒီ ရယ် ဘာပြောလဲ ဆိုတော့…..
ခိုင်၊ နင် တို့ ဆီမှာ ဗိုလ်ချုပ်တွေ အများကြီးပဲ နော်တဲ့။
အရမ်းချမ်းသာတာပဲ တဲ့။ အိမ်တိုင်း က အကြီးကြီးနဲ့ ပြိုင်ကားတွေလည်း ရှိတယ် တဲ့။
အဲဒါနဲ့ ဘယ်လို သိတုန်း လို့ မေးတော့။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်လောက်က ပရော့ဂျက် ရချင်လို့ သူရယ် သူ့ဘော့(စ) ရယ် မြန်မာပြည် သွားပြီးးး
ပရော့ဂျက် လိုက်ကြတာမှာ ဗိုလ်ချုပ် (သူ့ အပြော ဂျင်နရယ် General တဲ့) တော်တော်များများကို သာ ပိုက်ဆံပေးလိုက်ရတယ်၊
ဘာမှ လည်း မထူးပဲ တရုတ် ကမ်ပနီ တစ်ခုပဲ နောက်ဆုံး ရသွားတာပဲ တဲ့။
ဗိုလ်ချုပ်တွေ များလွန်းလို့ ဘယ်သူ ပေါက်ရောက်မှန်းမသိပဲ ကုန်သွားတာ အဖတ်တင်တယ်ပေါ့။ အဲဒီလို ဆိုလိုချင်တာ။
အဲဒါကလည်း ငြင်းမရတဲ့ အပိုင်းမို့ မငြင်းမိပါဘူးး..
ခုတော့ ပြောင်းလဲပါပြီ တဲ့။
အရင်က ရွှေ က သာ မကောင်းတာ မဟုတ်လားး၊ ခု စိန် က တော့ ကောင်းတယ် မဟုတ်လား တဲ့။
အော်ရီချင်တာ မရီပဲ ထိမ်းပြီး “ဘာတွေ ပြောင်းလဲတာတုန်း” လို့ ပြန်မေးမိရော။ ဟုတ်တယ်လေ။ သူတို့ အမြင်ပေါ့။
ခု ပရော့ဂျက် ရဖို့ ဗိုလ်ချုပ် အများကြီးကို ပေးစရာမလိုတော့ဘူးလေ တဲ့။
လွှတ်တော် လူကြီး တွေရဲ့ သားသမီးတွေ က ကမ်ပနီတွေ ထောင်ထားတယ်လေ တဲ့။
သူတို့ကို ဆက်သွယ်ရုံပဲ တဲ့။ နာမည်တွေပါ ပြောပါတယ်။
ဂလိုကိုးး၊ ကိုယ် မပိုင်တဲ့ အကြောင်းတွေ ရောက်သွားပြီ။ အဲဒါနဲ့ နားထောင်ရသမျှ အမြတ်ပဲ ဆိုပြီး ဆက်နားထောင်တော့ ဆက် ပြောပါတယ်။
အဲဒီ လူကြီးတွေ စလုံးမှာ ကွန်ဒို ဝယ်တာ အကြွေးတောင် မဟုတ်၊ ကက်ရှဒေါင်း ချပေးတာ။ အရမ်းချမ်းသာတာပဲ တဲ့။
သူတို့က ဘဏ်တွေပါ ပိုင်တယ် ဆို တဲ့။
ဒီလိုသာ စီးပွါးရေးပြေလည်နေရင် နောက်နှစ် နင်တို့ ထောက်ခံ နေတဲ့ လေဒီ မလိုဘူးပဲ တဲ့။
ရှိတဲ့ ကော်ဖီ ခွက်နဲ့ ပိတ်ပေါက်ချင်စိတ်ကို မနည်းထိန်းပြီးးး “နင်က သူတို့ ဘဝတွေကိုပဲ မြင်တာကိုး၊ အောက်ခြေ ဘဝတွေကို မှ မမြင်နိုင်တာ” လို့ ပြောတော့…
ကိုယ့် အကြောင်း သိတဲ့ မင်းသားကြီး က ဖြတ်ပြောပါတယ်။
သူတို့ ယူလို့ ဝပြီ ပဲ တဲ့။ အောက်ခြေ လူတန်းစား အတွက် လေဒီ ကို လိုအပ်လို့ နောက်နှစ်တော့ လက်ဂိုး Let go လုပ်သင့်ပါတယ် လို့ ဝင်ပြောတယ်။
ကေဇီ မင်းသားကြီးကို ချစ်တာ အဲဒါပါ။
အဲဒါကို ဒင်းရယ် ဆက်ပြောတယ်။
လေဒီ တက်ရင် ခု စီးပွါးဖြစ်နေသူတွေ အစဉ်ပြေမှာမဟုတ်ဘူး တဲ့။
အကုန် ပြောင်းလဲ ကုန်ရင် အလုပ်တွေ ရပ်ဆိုင်းကုန်မှာ သူ စိုးရိမ်သတဲ့။
ဂဒါဖီတို့ ရှိတုန်းကလည်း သူ့ကြောင့် နိုင်ငံ အခြေအနေ ဆိုးတယ် ဆိုးတယ်နဲ့ မရှိတော့ လည်း အခြေအနေ ပိုဆိုး တာ မျက်မြင်ပဲ မဟုတ်လား တဲ့။
ဆိုးတဲ့ သူမှ မရှိတော့ပဲ…
လေဒီ လည်း မလိုပါဘူး တဲ့၊
(ဒင်းက ကြိုးဆွဲရုပ် ကြီးကို အဟုတ်မှတ်နေတာ)
အဲဒါနဲ့ ကိုယ်လည်း မလျှော့တော့ဘူးး….
ဟုတ်တယ်။ သူတို့ မရှိတော့ လည်း မကောင်းဘူး လို့ ။
ဘာလို့လည်း ဆို သူတို့ ချပေးခဲ့တဲ့ စစ်စတမ် ဆိုးတွေ…
မိုင်းဆက် အပုတ်အပွတွေ နဲ့ နိုင်ငံကို ဆက်ရတဲ့ အတွက် ကယ်နိုင်မဲ့သူ မရှိရင် ပိုဆိုး ဆိုးသွားမှာ မငြင်းဘူး လို့။
လေဒီ ကို မျှော်လင့်တယ် ဆိုတာ ဒီ အချက်ကြောင့်…
သူမ အလုံးစုံ မလုပ်နိုင်ခဲ့ရင်တောင် နှစ် ၆ဝ ပျက်စီးမှုကို ပြန်လည် ပြင်ဆင်နိုင်မဲ့ လမ်းစ လေး တစ်ခု ချပေးနိုင်တဲ့ သူ တစ်ယောက် အနေနဲ့ပဲ ငါ တို့ မျှော်လင့်နိုင်တယ်…
နောက်နှစ် သူမ လုပ်ပိုင်ခွင့် ဘာမှ မရခဲ့ဖူး ဆိုရင် နိုင်ငံ အတွက် က လုံး ဝ မျှော်လင့်ချက် မရှိဘူး…
ခု လေဒီ ကို ဝေဖန်နေတဲ့ သကောင့်သား သကောင့်သမီးထဲက နိုင်ငံ အတွက် လုပ်နိုင်တဲ့သူ တစ်ယောက်မှ မရှိဘူး .. လို့ ဘာလို့ ဒီလောက် အရှည်ကြီး ပြောမိလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို အံ့ဩရအောင် ပြောမိတယ်။
ငိုကလည်း ငိုချချင်၊ အသံကလည်း တုန်လာသေးးး (အရေးဟယ် အကြောင်းဟယ်ဆို ဖြစ်ပြီ)
အဲဒါနဲ့ မင်းသားကြီး ရယ်။ ဘေးချင်းကပ်ထိုင်ရာက လက်ကို မပြောနဲ့တော့ သဘောနဲ့ လာတို့ပြီး ဟာသဖောက်ပါတယ်။
ငါ သူ့ကို စီတီဇင်ရှစ် ပြောင်းခိုင်းတာတောင် နောက်နှစ် အဖြေကို စောင့်ဦးမှာလို့ ပြောတာ တဲ့။
သူတို့ က နောက်နှစ် အဖြေပေါ် မူတည်ပြီး မျှော်လင့်ချက်ထားတာ လို့ ဝင်ပြောပါတယ်။
သူ့ဘက်ကလည်း လွန်သွားမှန်း သိလို့လားမသိ။
ဟုတ်ပါတယ်။ သူလည်း အခြေအနေ အစုံမသိပဲ ပြောမိတာနေမှာ ပါ နဲ့ လျှော့သွားတယ်လေ။
စိတ်ထဲကလဲ ဒင်း နဲ့ ဒီ တစ်သက် အလုပ် တွဲ မလုပ်ဘူး လို့ ကြောပြတ်သွားတယ်။
ဘယ်နဲ့။ အခြေ အနေ အကုန် မသိပဲ လာပြီး လေးဖမ်း ဒန်းစီး ခိုနီ လေသံပေါက်နေမင့်ဟာ။
ပြီးတော့ မိုးရွာရင် ရေလျှံတဲ့ ကိစ်စတွေ ဒင်း က ဟားသေးးးး။
ဗိုလ်ချုပ်တွေ ခိုနီတွေ ရေလျှံအောင် လုပ်ပေးနေရတဲ့ အစိုးရမို့ ရန်ကုန်ရေလျှံတဲ့ ကိစ္စ မလုပ်နိုင်သေးတာလေ..
ဝေးးးးးးးးးBravo တုန် ့ပြန်ချက်တော်တယ် ရဲတယ် ချက်ကျတယ်..
Public ကို Share လိုက်ရမားးးးးးးးးးးး
ပေါက်ကွဲရတာ အားမရလို့ ဒီမှာ လာ ရင်ဖွင့်မိတာ။
စီးပွားရေး သမား နိုင်ငံခြားသား ဆိုတော့လဲ သူတို့ စားရမယ့် အပေါက် ပဲ သူတို့ ချောင်း သပေါ့။
သာမန် လူတန်းစား တွေ ငတ်ပြတ် နေတာ သူတို့ စီးပွားရေး ထိခိုက်တာ မဟုတ်တော့ကာ။
ကိုယ်တွေကသာ လက်တွေ့ ခံ နေရလို့ စိတ်တွေ နာနေတာ…. း)
အကြောင်းစုံ မသိလို့ ပြောမိတဲ့ နိုင်ငံခြားသားကို အပြစ်တင်လို့ မရတောင်မှ…
နိုင်ငံ အတွင်းနေ ….
စားပေါက်ချောင်လို့ မှိန်းနေတဲ့ သူတွေ ပါးစပ်က …
ဒီလိုအခြေအနေမျိုး သူတို့ မရလို့ အော်တာပါ လို့ ပြောရက်တဲ့ လူမျိုးတော့ ကျိန်ဆဲချင်တာပဲ။
သူတို့ တစ်ဘို့တည်းကြည့်တိုင်း သူများကို ကြည့် မယ် မှတ်နေတဲ့ သူတွေလေ။
Godfather2ထဲက စကားလေး တစ်ခွန်း သွား သတိရတယ်။
Here we are, protected, free to make our profits without Kefauver, the goddamn Justice Department and the F.B.I. ninety miles away, in partnership withafriendly government. Ninety miles! It’s nothing! Just one small step, looking foraman who wants to be President of the United States, and having the cash to make it possible. Michael, we’re bigger than U.S. Steel.
သူတို့ ကျူးဘား မှာ အစိုးရ နဲ့ ပေါင်းပြီး စီးပွားရေး လုပ်တော့မယ် ဆိုတော့ ရလာမယ့် အကျိုးကျေးဇူး တွေပေါ့။
အဲ့လိုပဲ အခု အစိုးရ နဲ့ ပေါင်းပြီး သာယာနေတဲ့ လူတွေကတော့ ဒီလို အခြေအနေ မျိုး ကနေ ထိခိုက်တော့မယ် ဆိုတော့ မခံချင်ကြဘူးပေါ့လို့….
ကိုယ်က ပဲ ကြံဖန် နားလည်ရတော့မှာပေါ့နော်။။
အရင်လို ရန်လိုက်မဖြစ်၊ ရန်မလိုတော့ပါဘူးး။
ပေါင်းစားတွေကတော့ ဥသေးစိမ်မှ ဥသေးစိမ်ပဲ ပေါ့။
တူရို့လဲ အကွက်တွေ ချောင်းမပေါ့
စိန် ကို အာ့တွေကြောင့် လူထုက ထောက်ခံနေတာ..
ဆက်ပြီး သာ မဲ ပေးကြပေါ့။
နာ့ ကွန်မန့်လေးပဲ ကွက် နီနေတယ်
.. သူ့အနေနဲ့ ဒေါ်စုကို အစိုးရဆန့်ကျင်သူလို့ မြင်လို့ ဖြစ်လိမ့်မယ်.. အရင်အစိုးရလုပ်ခဲ့သမျှတွေကို မြေလှန်ပစ်ရင် တိုင်းပြည်ဆက်ပြီး မတည်မငြိမ်ဖြစ်မယ့်သနေဘာပြောတာပါ.. အာဏာရှင်စနစ် ကနေပြောင်းတဲ့ နိုင်ငံတွေဒီသဘောနဲ့ကြုံတတ်တာကိုး.. ဒီဘက်စွန်းကနေ အားနဲ့ရုံးရင် ဟိုဘက်စွန်းကို ကျွံသွားတဲ့သဘော.. ဒါပေမယ့် ဒေါ်စုက သူထင်သလို အစိုးရဆန့်ကျင်ရုံ၊ အစိုးရလုပ်သမျှ ပြောင်းပြန်လုပ်ရုံသာတတ်တဲ့ လူမဟုတ်ပဲ သူ့ideology နဲ့သူ တိုင်းပြည်ကိုဦးဆောင်ချင်သူဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြလို့ရပါတယ်..
အဲလောက် ရှင်းပြတတ်ရင် ဇီဇီ ဘယ်ဟုတ်တော့မတုန်းး?
နာ့ ရဲ့ သွေးပူရင် လိပ်ပတ်မလည် မှုလည်း သိသားနဲ့။
ဒါနဲ့ ဘယ်က ပေါ်လာတာတုန်းဟမ်?
ဟိုပို့(စ) က စနေနေ့မှ တက်မှာနော်။
စိန် တွေ ၊ ရွှေ တွေ …ထက်
စု နိုင် ပါ စေ လို့…
ဆု တောင်း ပါ တယ် ကွယ်…
ဇီဇီ အရမ်းတော်တယ်… အဲ့ဒါချို ကောင်းနေတေးဒယ် ….၁ချက်၁ချက်ကလေးကလွဲရို့ …. အဟိ အဟိ
အမှန်ဆို ရူးချောင်ဆောင်ပြီး လည်ပင်းညှစ်ခဲ့ရမှာ။
တခါတည်း အလုပ်ပြုတ်ရော နေမှာ၊
စီးပွားရေး သမားကတော ရွှေဖြစ်ဖြစ် စိန်ဖြစ်ဖြစ် မြဖြစ်ဖြစ် ပေါင်းစည်းရေးရှာပြီး သူ့အကျိုးအတွက် လုပ်နေကြမှာပါဘဲ သူ့တို့အတွက်ကတော့ အာဏာရအစိုးရ ဒို့ အစိုးရ ပါဘဲလေ။
ခေါင်းဆောင်မပီတတဲ့ အစိုးရဖြစ်ရင် လူထုမှာသာထိခိုက်လေ့ရှိတာပါလေ။
ဪ မြန်မာပြည် မြန်မာပြည် ပြည်သူတွေဘဝကို တွေးမိတိုင်းရင်နာမိနေစဲပါဘဲလေ။
လေးခ ပြောသလိုဘဲ စီးပွားရေးသမားက တော့ ဘယ် အစိုးရ တက်တက် ဒို့ အစိုးရဘဲ မို့ သူစိုးရိမ်သလို
လေဒီ တက်ရင် ခု စီးပွါးဖြစ်နေသူတွေ အစဉ်ပြေမှာမဟုတ်ဘူး ဆိုတာတော့ဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူး …. ဖြစ်လဲ တစ်ဦးနှစ်ဦးအပြင် မဖြစ်ဘူး .. လေဒီလဲ အကုန်လုံးကို ရပ်ပြစ်လိုက်လို့ မဖြစ်ဘူး .. မရဘူး..
စိုးရိမ်ရမှာက လေဒီ အလုပ်လုပ်လို့ မရအောင်ဖျက်မှာ … တိုင်းပြည်ကိုဖျက်မှ သူတို့ အာဏာလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်ရောက်မှာ ဆိုတော့ … အဲ့ဒီ့ အဖျက်ဒါဏ်ကို ဘယ်လိုတုန့်ပြန်မလဲ ဆိုတာ လေဒီ ခုထဲ က စဉ်းစားစီမံမှ ရမှာ.. ၂၀၁၅ နိုင်ဖို့က လွယ်မယ်.. ၂၀၁၅ အကျော်ထိန်းဖို့က ခက်မှာ … ပြည်သူတွေ အငတ်ခံ နိုင်ကြမှ ပြောင်းလဲဖို့ ဖြစ်မှာ ….. ဆိုတော့ … ဆိုတော့ ….
ပြည်သူတွေက ခုထက် ငတ်ဦးမှာလားး
ငတ်တာလဲ ငတ်နေပါပြီ ..ဒီထက်ပိုငတ်ကြဦးမှာ နဲ့ ဒီထက်ပိုငတ်တာကို တောင့်ခံ ပေးနိုင် ကြမှ လေဒီ ထိန်းနိုင်မယ်..
ပြည်သူတွေ အဲ့ဒီ့ 2015 ကျော် အပြောင်းအလွဲ ကို မခံနိုင်ရင် လေဒီကြာကြာထိန်းနိုင်မှာ မဟုတ် .. အရေးအကြီးဆုံးက လေဒီထက်ပြည်သူတွေဘဲ ..
စံနစ် အပြောင်းအလဲ တစ်ခု က ဒီထက် ပိုငတ် (သို့) သွေးမြေကျပြီးမှ သာလျှင် မြန်မြန်ဖြစ်နိုင်တာ..နို့မို့လို့ကတော့ .. ကျွန်တော်တော့အပြောင်းအလွဲ ဆိုတာ ဒီတသက် မြင်သွားရမှာ မဟုတ် …
” အမေ ဘယ်လို သိပ်သိပ် ကိုယ် အိပ် မှ ပျော်မယ်” (စီဒီ တူ တီချယ်ကြီး)
ပြောင်းလဲမှုလိုချင်လားး၊ ပြောင်းလွဲမှု လိုချင်သလား
ဒီမိုကရေစီ ရချင်လား၊ ဒီမို ခရေးဇီး ရချင်သလား
ခေါင်းဆောင်ကိုလည်း ပုဆိုးစိမ်းဝတ် ကြိုးဆွဲရုပ်လိုချင်သလားး၊ ကမ႓ာ့ အသိအမှတ်ပြု ခေါင်းဆောင် လိုချင် သလား ဆိုတာတော့ ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ရမဲ့ အပိုင်းးး
ပြည်သူ ပီသရမလားး ပြည်ဒူ ဖြစ်မလား ဆိုတာလည်း ကိုယ် ရွေးရမဲ့ အပိုင်းး
ပြည်သူပီပီသသ ဖြစ်ချင်ပါတယ် ဆွိရယ်။
လေဒီတက်ရင် တခြားတော့မသိဘူး လူတွေ သူ့နေရာနဲ့သူ အံဝင်ခွင်ကျအောင်တော့ သူသုံးပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
လမ်းကြောင်းတခုပေါ်ရောက်ဖို့လမ်းစလေးတခုချပေးနိုင်ရင်ပဲ မဆိုးတော့ဘူး ပြောရမှာ
ဒီမိုး ဒီရေ ဒီလှေ ဒီလူတွေ ကြားထဲမှာ အမေစုကို သနားတောင် သနားသေးတယ်။
​လေဒီတတ်​ရင်​ ခုစီးပွားဖြစ်​​နေသူ​တွေ အဆင်​မ​ပြေမှာ​တော့ ​သေချာတယ်​။ ဒါ​ပေမဲ့ ဝိသမ​လေ​ာဘသမားမဟုတ်​တဲ့ ပြည်​တွင်​းစီးပွား​ရေးလုပ်​ငန်​းရှင်​အချို့နဲ့ ပြည်​ပရင်​းနှီးမြှပ်​နှံသူ​တွေအတွက်​ လုံခြုံစိတ်​ချပြီး အာမခံချက်​အပြည်​့ရှိတဲ့ တရားဥပ​ဒေစိုးမိုးမှုမျိုး ​ပေါ်လာမှာ… ဒါ​ကြောင်​့ ကိုယ်​ကျိုးတစ်​ခုပဲ ကြည်​့တဲ့ ဝိသမ​လောဘသား​တွေနဲ့ အာဏာရူး​တွေအတွက်​ကလွဲပြီး တတိုင်​းပြည်​လုံးအတွက်​ ​လေဒီက မရှိမဖြစ်​ လို အပ်​ ဆဲ ပဲ လို့……
ဟွန်​း…. ဒင်​းကြီးကို မုန်​းးးတာ
အနေမှန်တဲ့ စီးပွါးရေးသမား အတွက်က ဘယ် အစိုးရမှ ကြောက်စရာကို မလိုဘူးး
ဘယ် အစိုးရ တက်တက် စိုးရိမ်စရာမလိုဘူးး
စိုးရိမ်ရမှာက မှန်မှန်ကန်ကန်စီးပွါးရှာသူတွေကို အကာအကွယ် မရှိတဲ့ ဥပဒေ ကိစ္စကို စိုးရိမ်ရမှာ။
ခု ကြောက်တဲ့ အသံထွက်တဲ့သူတွေက ဘယ်ထဲက ဆိုတာ သိသာတယ်။
လူတစ်စုကောင်းဖိူ့ နောက်လူတစ်စု ပျက်ပေးရတယ်ဆိုတာ
ရေလျှံဖို့ ရေလျှံတာကို မလုပ်အားဘူးပေါ့။
နေပြည်တော်က လမ်းတွေ ကောင်းဖို့ လှိုုင်သာယာ(ရန်ကုန်က)လမ်းတွေ ဆိုးပေးရမယ်
ဘပ်ဂျက်အရ သချင်္ာနည်းစနစ်အရ ဒါက ဖြစ်ကို ဖြစ်ရမှာလေ
တား တို့က စားလို့ ကို ဝသေးဘူးဂျ!!!
မျက်စိထဲ ခွေးအ ရယ် ဝံပုလွေရယ်… ဝက်ဝံရယ် ခြင်္သေ့ရယ် မြင်မိသလားပဲဗျ..
သေချာတာတော့ သူတို့ ခြင်္သေ့ကိုဖြုတ်ချရေးဆိုတာပပဲ
၂၀၁၅ မတိုင်ခင် …
ထောင်ထဲက ခွေးအ တွေ လွှတ်မပေးလိုက်ရင် ပြီးတာပါပဲ။
အပြင် က ဝံပုလွေအုပ် က ညာဏ်ရှိသေးတယ် လို့ ယူဆလို့။
ကျောက်စိမ်း တိန်ညင် says:
စီးပွားရေးသမားက သူ့အမြင်ဘက်ကနေ ပြောတာဆိုတော့ မမှားပါဘူးလေ တဂယ်တော့ ဘယ်သူတက်တက် အထိုက်အလျောက် ပြေလည်ယုံမှ တပါးအခြားမရှိ …..
ကျုပ်တောင် အခုပိုက်ဆံစုနေတာ မြိတ်ကျွန်းစုဘက်သွား ရေတပ်ကောင်းကောင်းထောင်ပီး ခွဲထွက်ရေးလုပ်မလားလို့ Turkeysland ဆိုပီး
စိန်ကြက်ဆင် တို့က စီးပွါးရေးပဲ သိတယ် ဆိုတာ သိပါ့အေ။
ဘူဘာပြောပြော ၂၀၁၅ မှာကြံ့ဖွတ်နိုင်စရာလမ်းမမြင်…လေဒီမတက်တောင်..ပြည်သူကြိုက်တဲ့ပါတီတွေ
တက်လာမှာအသေအခြာပဲ..ဒါပေမဲ့ ရှုံးသူတို့က နိုင်သူတို့ အကဲ့ရဲ့ခံရအောင်၊ ပြည်သူတွေစိတ်ပျက်စေလာအောင် နည်းစုံလမ်းစုံနဲ့ကြိုးစားကြလိမ့်မယ်…ခုလည်း မဟုတ်တရုတ်တွေသူတို့ပဲဖန်တီးနေတာ အသိသာကြီးပါလေ..
ဆိုတော့…ပြည်သူလူထုက ညီညွတ်ရုံတင်မက “မအ” ကြဖို့အလွန်အရေးကြီးမယ်ထင်တယ်….
နောက်တစ်ချက်က ဒီအချိန်မှာ ဘာသာရေး၊ အမျိုးစောင့်ရေးထက် တကယ့်နိုင်ငံရေးကို တိုးတက်အောင်ဖက်ကို ဦးစားပေးသင့်ကြတယ်…ပြည်သူလူထုက မျက်စေ့စုံမှိတ် ဘာသာရေးရှေ့တန်းတင်နေကြသ၍ကတော့…အစိမ်းကောင်ကြီးများအကြိုက်ပေါ့…
လူတွေဟာ သဘောတရားမှန်မှန်၊ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာမတွေးကြ၊မလုပ်ကြဘူးသေးသ၍….အဟွတ်
မယောင်ရာတွေ ဆီ လူး ချင်နေကြရင် မာဆပ် မှာပဲ အလုပ်လုပ်သင့်တယ်။
အမသာဆိုနေရာတင်ခွက်နဲ့ကောက်ထုမိမလားပဲ။ သူ့ဆီအလုပ်သွားမလုပ်နဲ့။ ဒင်းက ခရိုနီအောက်ဆွဲကောင်။
နောက် တောက် ရှာမယ် မွသဲ
လက်စသတ်တော့ မင်းသားကြီး ဆိုတာ ဘောစိ ကို ပြောနေတာကိုး။
ကျန်တာတော့ အခု မပြောသေးဘူး။
ဥ ထားဦးမယ်။ နောက်ကြုံ မှ။ ;-)
အဲ့တာ ကျော်တို့ အစ်မ..အဲ့တာကျော်တို့အစ်မ…မဟုတ်မခံကွ..( .အလွတ်ဝင်အမှတ်ယူတာ အဟိဟိ )
စစ်ကောင်တွေ ပြုတ်မှာ ကြောက်တဲအထဲ ခရိုနီတင် မကဗူး… မဆလ နဝတ နအဖ အစဉ်အဆက်တလျောက် ပေးကမ်းကျွေးမွေးထားတဲ့ လူ ထောင်သောင်းချီတယ်.. အချို့ဆို နိုင်ငံရေး ပင်စင်ဆိုပဲ.. အဲဒီကောင်တွေ ရာအိမ်မှူ း၊ ရပ်ကွက်ဥက္ကဌ၊ သတင်းပေး၊ စွမ်းအားရှင် လုပ်နေတာ။ ဘွားဒေါ်တက်လျင် အဲဒီဘတ်ဂျက်တွေ အပိတ်ခံရဖို့ရှိတော့ အဖျက်လုပ်ငန်းတွေ ဒင်းတို့က လက်တွေ့ လုပ်ကြမယ်…။ ဘဂျုပ်ကျီးသမ်းရွှေ လုပ်သွားတဲ့ ပြည်သူ့စစ် မဟာဗျူ ဟာဆိုတာ ငါးကြင်းဆီနဲ့ငါးကြင်း ပျံကြော်ထားတာ။ သမဒ ဥသိန်းဂိန်လက်ထက် ဆက်သုံးနေတယ်။